Ny firaka alimina alimina dia nitazona ny fatin'ny lehilahy farany
Aluminium Alloy Preformed Dead End Guy Grip miaraka amin'ny insulate Coating (SNAL) dia manamboatra terminal amin'ny tariby misy ny tany ambony.
Ny famonoana olona farany azo ampiharina ho an'ny mpitarika dia azo ampiharina hizaka ny fantsom-baravarankely mihidy na mitaingina ao anaty tsipika fandefasana sy fizarana.
Izy io dia ny mpisolo ireo clamp maty paingotra nentim-paharazana toy ny karazana bolt, karazana compression ary karazana wedge.
Firaketana matevina vita amin'ny alim-by amin'ny alim-by amin'ny alim-bika ho an'ny telecom tariby, conducteur insulator, tariby fibre, tariby TV, tariby nomerika
Ny famonoana alim-by vita amin'ny alim-by amin'ny alim-baravarankely dia manana ny lahasa lehibe indrindra hanamboarana tsangambato / tilikambo ny tariby, conducteur, kofehy, rafitra
Ny faritry ny tadivavarana dia tsy maintsy arovana miaraka amin'ny thimble, pulley, insulator sns, fitaovana sns.
Aluminium Alloy Helical Preformed Dead End Guy Grip miaraka amin'ny insulation Coating (SNAL) dia manamboatra terminal amin'ny tariby ambanin'ny tany.
Fangejana bandy efa vita
Dead end preformed dia be mpampiasa amin'ny fametrahana mpitarina mitanjaka na mpanamory fiaramanidina mitaingina overhead ho an'ny tsipika fandefasana sy fizarana, ny fahamendrehana sy ny fahombiazan'ny toekarena amin'ny vokatra dia tsara kokoa noho ny karazana bolt sy ny karazana fihenam-bidy karazana hydraulic izay be mpampiasa amin'ny boriborintany ankehitriny. Ity faran'ny maty tsy manam-paharoa iray ity dia milamina amin'ny endriny ary tsy misy bolt na fitaovana mitazona fihenjanana be. Izy io dia azo vita amin'ny vy vita amin'ny vy na vy vita amin'ny aluminium.
Fitaovana tsipika namboarina: Tariby vy mitafy aluminium
Kavina fiadiana anaty, tehina fiadiana ivelany, thimble, tadivavarana mihantona U, tadivavarana, bolt, nut, sns.
1. Zaraina mitovy ny adin-tsaina, tsy misy fifantohana amin'ny adin-tsaina. Afaka miaro tsara ny tariby optika izy io.
2. Eo ambanin'ny fepetra tsy mihoatra ny hamafin'ny tsindry amin'ny tariby dia manana hery mitazona avo kokoa ho an'ny tariby izy io ary afaka manohana hery mihamitombo kokoa.
3. Ny herin'ny fihazonana ny tariby dia tsy latsaky ny 95% ny naoty naoty manohitra ny hamafin'ny tariby optika, manome fahafaham-po tanteraka ny filan'ny fametrahana ny tariby.
Fangejana bandy maty taloha
Tariby ambanin'ny tany ho an'ny mpitondra vy; tariby clamp dia ampiasaina amin'ny vy nandrisika.
Ny vy mitafy aluminium, ACSR mpitantana tsara, ny clamp tariby dia ampiasaina amin'ny wir vy mitafy aluminium
Fandraisana an-tanana efa maty talohan'ny famaranana
Ny fihenan'ny fihenjanana mialoha dia natao hampifandraisana ireo tariby ADN sy bao / tilikambo. Ny tsorakazo fiadiana dia afaka manome fiarovana sy fampandehanana ireo tariby ADSS. Ny famolavolana manokana ny tsorakazo Preformed dia manome antoka fa ny Clamp amin'ny fihenjanana dia tsy afaka miteraka fihenjanana be loatra amin'ny tariby ADSS, mba hiantohana ny rafitry ny tariby mahazatra.
Tension Clamp dia natao hampifandraisina amin'ny tariby OPGW sy ny tsangambato (na tilikambo). Ny tsorakazo fiadiana dia afaka miaro sy manome cushioning ny tariby OPGW. Ny famolavolana manokana ny kiborin'ny fiadiana dia manome antoka fa ny fikolokoloana fihenjanana dia tsy mety miteraka fihenjanana be loatra amin'ny tariby OPGW, mba hahazoana antoka fa azo antoka ny androm-piainan'ny rafitra tariby.
Izy io dia ampiasaina amin'ny fifandraisan'ny sampana tariby voarindra amin'ny rafitra fizarana herinaratra fananganana, ny fifandraisana tariby mitaingina haavo ambany, ny fifandraisan'ny sampana tariby mifatotra mitaingina haavo ambany, ary ny rafitra fizarana herinaratra mandeha amin'ny jiro.
Ny setrin'ny fihenjanana efa niasa dia be mpampiasa amin'ny fametrahana ireo mpitantana tsy mitanjaka na ny mpanamory fiaramanidina mitaingina overhead ho an'ny tsipika fandefasana sy fizarana, ny fahamendrehana sy ny fahombiazan'ny toekarena amin'ny vokatra dia tsara kokoa noho ny karazana bolt sy ny karazana fihenam-bidy karazana hydraulic izay be mpampiasa amin'ny boriborintany ankehitriny.
Ny firafitra vaovao sy ny famolavolana marina, hany ka ny setrin'ny fihenjanana efa namboarina dia manana fahombiazana azo antoka ary matetika vita amin'ny vy mifono vy, vy tariby ary fitaovana hafa.
Tension Clamp dia natao hampifandraisana ireo tariby sy poste / tilikambo ADSS. Ny tsorakazo fiadiana dia afaka manome fiarovana sy fampandehanana ireo tariby ADSS. Ny famolavolana manokana ny tsorakazo Preformed dia manome antoka fa ny Clamp amin'ny fihenjanana dia tsy afaka miteraka fihenjanana be loatra amin'ny tariby ADSS, mba hiantohana ny rafitry ny tariby mahazatra.
Fitaovana tsipika namboarina: Tady vy mifono vy na tariby vy nandrisika.